Nodimandry Ingahy Derek Walcott ‘Iray Amin’Ireo Poeta Andrarezina’ Rehefa Avy Nametraka ny Maha-Karaibeana Tao An-tsaintsika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Marsa 2017 6:25 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Български, Español, English
Derek Walcott tao amin'ny Fetiben'ny Tononkalo faha VIII tao Granada, Nicaragua, Febroary 2012. Sary: Stanislav Lvovsky, CC BY-NC-ND 2.0.
Maty tao an-tranony tao St. Lucia teo amin'ny faha 87 taonany i Derek Walcott, mpandresy tamin'ny Loka Nobel Literatiora taona 1992, ilay andrarezina izay namboly ny tononkalo Karaibeana tao amin'ny tsikalam-pieritreretantsika ara-literatiora manerantany.
Miezaka ny hanazava ny lova maharitr'i Walcott ao amin'ity fanambarana ofisialy ity ny Bocas Lit Fest, izay fetiben'ny literatiora lehibe indrindra any Karaiba Miteny Anglisy :
Nanana toerana lehibe teo amin'ny taranaka mpanoratra Karaibeana nifandimby miisa telo i Walcott , ary nahitana fiantraikany maro samy hafa izany. Mpifehy ny teny izy ary nanaporofo tsy nisy fisalasalana fa tsy fananan'ny firenena na kolontsaina tokana ny teny anglisy. Nanana fanoloran-tena masiaka sy manakaiky ny ara-pivavahana izy ho an'ny tontolon'ny toerana nahaterahany St. Lucia sy i Karaiba midadasika kokoa, izay nomeny laza tao amin'ny tononkalony sy ny fanoharany. Nino izy fa asan'ny poety izany mba hanome anarana ny toerana, ny olona, ​​ary ny zavatra izay efa nafenin'ny tantara, ary mandrisika ireo poety hafa mba hanao toy izany koa izy.
Nampiseho i [Walcott] fa mety ho toerana tsara tarehy manan-tantara sy manana ny dikany maha izy azy na dia ny tanànakely madinika ao amin'ny nosy kely eny an-tsisin'izao tontolo izao aza, izay voasoratra ao anaty tononkalony.
Maneho izany mivantana ny tononkalony lava voarindra antsoina hoe ‘Omeros’ izay iray amin'ireo literatiora lehibe maneran-tany. Nifanamby tamin'ny ortodoksa sy ireo mpampiasa fahefana izy, ary nanipy ny andraikitra ho an'ny mpanoratra tanora.
Ambonin'ny zava-drehetra, izy, ilay teraka tao an-tanàna kelin'ny Castries, nianatra tao Kingston, nipetraka sy niasa tao Port of Spain, no porofo velona fa afaka ho tonga poety lehibe amin'ny alàlan'ny fanoratana ny zava-mitranga amin'ny fiainana andavanandro isika tsirairay avy.
Ankoatra ny Loka Nobel, Walcott no nahazo ny lokan'ny ‘manam-pahaizana’ Orina Mpanasoa MacArthur tamin'ny taona 1981; ny Medaly Volamenan'ny Mpanjakavavy ho an'ny Tononkalo tamin'ny taona 1988; ny Loka Boky Anisfield-Wolf ho an'ny Zava-bita Miavaka tamin'ny taona 2004 ; ny Loka TS Eliot tamin'ny taona 2011; ny Loka OCM Bocas ho an'ny Literatioran'i Karaiba tamin'ny taona 2011 izay anisan'ireo lisitry ny Loka azony avokoa .
Namoaka ny bokiny voalohany momba ny tononkalo izy tamin'izy 19 taona, niaraka tamin'ny fanohanana ara-bola avy amin'ny reniny mba handoavana ny vola lany tamin'ny fanaovana pirinty. Fiaraha-miasa niaraka tamin'ilay mpanao hoso-doko Ekaosey Peter Doig ny asany vao haingana indrindra, ‘Morning, Paramin’ (Farrar, Straus sy Giroux, 2016) izay nampivady ny tononkalo tamin'ny hosodoko. Nahazo dera tamin'ny tsikera avy amin'i Julian Lucas tao amin'ny The New York Review of Books izany amin'ny filazana azy ho asasoratra mampiakatra ny fitakiana tsy manam-pahataperana an'i Walcott, mampitodika indray sy ny fahatalanjonana amin'ny tontolo Karaibeana :
Mitoetra ao anatin'ny maizimaizina ny tononkalo , fa ny fankalazana , ny fahafinaretan'ny mason'ny mpanao hosodoko izay mifandray akaiky amin'i Walcott tahaka ny nataon'i Shakespeare tamin'ny zatovo tao amin'ny tononkalo no tena mibahan-toerana amin'izany ; miaraka amin'ny baiko mba hiarovana ny hatsarana eto amin'izao tontolo izao, mba hamokarana sy hamokarana indray, angamba ny mba handovana izany mihitsy aza.
Misaona ireo manam-pahaizana, mpianatra, mpamaky, mpakafy teatira, poety sy mpanabe tao amin'ny faritra. Nanakoako ny fanomezam-boninahitra maro be tao amin'ny media sosialy sy tao amin'ny sehatra fampahalalam-baovao mahazatra izay nanasongadina ny fiantraikan'ny asasoran'i Walcott teo amin'ny olona tsirairay, ny fikambanana, ny hetsika ary ny fianarana.
Nandritra ny fanomezam-boninahitra ofisialy, nampahatsiahy ny fanadihadiana nataon'i Karen McCarthy Woolf momba ny ‘Morning, Paramin’ ny Fiarahamonina Poety , izay mamaritra ny lova navelan'i Walcott ho “mampanan-karena amin'ny fiteny sy lahateny ka nahafahan'ny mpamaky mba hahalala ny tantaran'ny faritra sy hijoro eo anatrehan'ny tontolo iainana lasa roa sosona. “
Tany ivelan'ny faritra, maro be ihany koa ny tehaka avy amin'ny vondrom-piarahamonina mpamaky sy mpanoratra iraisam-pirenena izay nifantoka tamin'ny fahaizan'i Walcott mamehy ny fiteny; ny finiavany hanolo-tena ho an'ny endrika tononkalo Karaiba; ny finiavany mahatalanjona isan-karazany hanehoana ny tontolo sy ny olona ao anatin'izany.
Mitanisa ny teny manokan'i Walcott momba ny hankaton'ny fomba fijeriny manokana mba handrisihana ny fototra hiaingan'ny poety amin'ny fihetsem-po mirindra manokana sy tsy misy tsiny ny filazana manjo ofisialy tao amin'ny The Guardian :
Mbola mitohy ny fisarahan'ny teatira ho an'ny mainty sy ho an'ny fotsy, ary tsy te ho anisan'ireo famaritana ireo aho. Mpanoratra Karaibeana aho .
Nisy ihany ny adihevitra mikasika ny asan'i Walcott na izany aza. Nifarana tampoka ny firotsahany ho fidiana tamin'ny taona 2009 ho an'ny toerana malazan'ny Mpampianatra Tononkalo ao Oxford rehefa nisy olona nisarika ny sain'ny oniversite mikasika ny fiampangana herisetra ara-nofo izay nitranga tany amin'ny roapolo taona lasa. Ary nametra-pialana sahady andro vitsivitsy taorian'ny nitondràny ilay vehivavy izay nahazo ilay toerana avy eo rehefa fantatra fa izy no nitoroka azy.
Ho fanomezam-boninahitra ny fiainan'Ingahy Derek Walcott, mameno ny sehatra famelan-kafatra sy ny sehatra fifanakalozan-kevitra an-tserasera ary ny tontolon'ny vahoaka hatrany ny asasorany sy ny lova navelany, entanina ireo misaona mba haka ny boky nosoratany eny amin'ny talantalana, ary hanokatra izany ho any amin'ireo tononkalo malalany, mankalaza ny fisian'i Walcott amin'ny andininy tsara indrindra sady malaza izay tsy hain'ny fahafatesana ovaina.